आज फर्किदैछन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी, यस्तो छ कार्यतालिका ! – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
आज फर्किदैछन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी, यस्तो छ कार्यतालिका !
अर्थ राजनीतिप्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७६, आईतवार November 11, 2019
काठमाडौं – नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आइतबार (आज) फर्किने भएका छन् । सी आइतबार मध्याह्न १२ बजेपछि स्वदेश फिर्ताका लागि विमानस्थल तर्फ जाने र दिउँसो १ बजे चीनका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको निमन्त्रणामा नेपाल आएका राष्ट्रपति सीले भेटवार्तालाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएका छन्
राष्ट्रपति सीले आइतबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्यहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बिहान साढे १० बजे नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरुले सामुहिक भेटवार्ता गरेका सीले त्यसलगत्तै प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रचण्डसँगको भेटपछि सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् । सी र ओलीको भेटवार्तापछि द्विपक्षीय वार्ता हुने कार्यतालिका रहेको छ । द्विपक्षीय वार्तामा विभिन्न सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । यो क्रम करिब १ घण्टासम्म चल्ने बताइएको छ ।
सीले शनिबार बेलुका नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरीसकेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
‘सुन राखेर ब्याज पाइनछ त ?’ यसो भन्नुहुन्छ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी अधिकृत
मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालन, विनोद र्अयालद्वारा उद्घाटन